जेष्ठ नागरिक विरूद्व दुर्व्यवहारकाे अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सामानका साथ मनाईयाे
सिरहा : सिरहाकाे जेष्ठ नागरिक विरूद्व दुर्व्यवहारकाे अन्तराष्ट्रिय दिवसकाे अवसरमा सिरहा नगरपालिका वडा न. ७ काे सहयाेग र सङाेर नेपाल मझाैरा ३ सिरहाकाे अायाेजनमा वडा न. ७ का जेष्ठ नागरिकहरूलाई सामान गरि मनाईएका छन् । १५ जना जेष्ठ नागरिकहरूलाई चादर र सुपानेट झुल वितरण गरि कार्यक्रमकाे अध्यक्ष उपेन्द्र साह र प्रमुख अथिति संस्था अध्यक्ष बैधनाथ कुमार यादबले सामान गर्नु भयाे । जेष्ठ नागरिक भार हाईन् समुदायिका मर्ग दर्सक हाे । हामी उनीहरूलाई भगवानकाे सरह पूजा र माया दिनु पर्छ वडा सचिव श्याम कर्णले बताउनु भयाे । हाम्राे मिथिल समाजमा सबै मिलेर एकैठाउँ बस्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहिअाएका छन् । तर हाल अावस्थामा छाेरा छाेरी तथा बुहारीबाट जेष्ठ नागरिकहरूलाई बढी दुर्व्यवहार सहनु परेका छन् । यसका लागि समाजमा वृद्व अासरमका वैकल्पिक उपायहरू खाेजि भईरहेका छन् । यदि हामी अाफनाे बुवा अामालाई वृद्व अासरमा राखियाे भन्ने हाम्राे संस्कृत नैई खातारामा पर्न सक्छ । भाेलि हामीलाई पनि परिवारका मायाका लागि छटपटिनु पर्छ । त्यसैले असाहय हाेईन् परिवारमा पुनरस्थापना गराई जनतेना र जेष्ठ नागरिका महत्व बारेमा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ । स्थानिय सरकारले जेष्ठ नगरिकलाई भिन्न कियाकलापहरूमा महत्व पूर्ण स्थान दिनई समाजलाई सहि मर्गमा ल्याउनु पर्छ संस्था अध्यक्ष यादबले बताउनु भयाे । जेष्ठ नागरिकहरूलाई कसैले दुर्व्यवहार गरे वडा न. ७ काे अध्यक्ष न्याय दिलाउन अगाडि अाउनेछ । यश वडाले जेष्ठ नागरिक सामानका लागि विभिन्न याेजना पनि ल्याउनेछ । अगामी अार्थिक वर्षकाे याेजनामा जेष्ठ नागरिकहरूलाई एकठाउँमा बसि अाफनाे भलाखुसारी गर्नका लागि जेष्ठ नागरिक दलान निर्माण गरिने प्रतिवद्वता ७ नम्वर वडा अध्यक्ष साहले बताउनु भयाे । दालनमा हप्ताकाे दुई दिन विभिन्न परिकार पनि वितरण गरिने जानकारी दिनु भयाे । कार्यक्रम हलमा वडा सदस्यहरू लगायत ५० जनाका उपस्थिति रहेका थियाे ।